Fuji TV – Networks – MMANIME
One Piece Synopsis of One Piece One piece …………….. One pieceဟာ စထှကခွဲ့တဲ့အခှိနကွစပှီး ခုခှိနထွိလူကှိုကအွမှားဆုံးဂပှနွAnimeဆယကွားထဲမှာ ထိပဆွုံးကနေ အမှဲရပတွညလွှှကရွှိပါတယွ..။ One pieceဟာ အရာရာကိုမဆုတမွနဈကှိုးစားခငှတွဲ့စိတွ၊ အခငွှးခငွှးစညွးစညွးလုံးလုံးနဲ့ကိဈစတှကေိုဖကှကွှောလွိုတဲ့စိတဓွာတတွှေ၊ ခှနအွားတှပေေးနိုငတွာအမှနပွါ One piece ဖနတွီးသူEiichiro Odaဟာ စဖနတွီးတုနွးကအပိုငွး၁၀၀လောကပွဲရေးဆှဲမယလွို့ရညရွှယခွဲ့ပမယွေ့ မထငမွှတပွဲလူကှိုကမွှားအောငမွှငမွှုရခဲ့တာကှောငွ့ စထှကတွဲ့အခှိနကွစပှီး ခုခှိနအွထိ နှဈပေါငွး၁၉နှဈအတှငွး အပိုငွး၉၀၀ကှောအွထိထှကရွှိခဲ့ပါပှီ ၂၀၂၄မှာဇာတသွိမွးမယလွို့လညွးသတငွးတှလညွေးကှားထားပါတယွ ကနှောတွို့Fanတှကေိုယတွိုငလွညွးဇာတလွမွးအဆုံးကို သိခငှပွမယွေ့ one piece ဇာတလွမွးဆုံးသှားမှာကိုလညွးစိုးရိမမွိတာအမှနပွဲဒါပမယွေ့ Eiichiro Odaရဲ့ ကနွှးမာရေးဟာတဖှညွးဖှညွးခှှတယွှငွးလာတာကှောငွ့ one pieceဇာတလွမွးလညွး မကှာခငပွှီးဆုံးတော့မယလွို့ကောလဟာလတှထှကနွေပေါတယွ..။ ဇာတလွမွးပှီးဆုံးသှားရငတွောငွ One Piece Anime လေးကိုကနှောတွို့တှအမှတေရွပှီး ကနှနွခေဲ့မယဆွိုတာအသအခှောပါပဲ ..။ One pieceဟာ စထှကခှဲ့တဲ့အခှိနကှစပှီး ခုခှိနထှိလူကှိုကအှမှားဆုံးဂပှနှAnimeဆယကှားထဲမှာ ထိပဆှုံးကနေ အမှဲရပတှညလှှှကရှှိပါတယှ..။ One pieceဟာ အရာရာကိုမဆုတမှနစကှှိုးစားခငှတှဲ့စိတှ၊ အခငှှးခငှှးစညှးစညှးလုံးလုံးနဲ့ကိစစှတှကေိုဖကှကှှောလှိုတဲ့စိတဓှာတတှှေ၊ ခှနအှားတှပေေးနိုငတှာအမှနပှါ One piece ဖနတှီးသူEiichiro Odaဟာ စဖနတှီးတုနှးကအပိုငှး၁ဝဝလောကပှဲရေးဆှဲမယလှို့ရညရှှယခှဲ့ပမယှေ့ မထငမှှတပှဲလူကှိုကမှှားအောငမှှငမှှုရခဲ့တာကှောငှ့ စထှကတှဲ့အခှိနကှစပှီး ခုခှိနအှထိ နှစပှေါငှး၁၉နှစအှတှငှး အပိုငှး၉ဝဝကှောအှထိထှကရှှိခဲ့ပါပှီ ၂၀၂၄မှာဇာတသှိမှးမယလှို့လညှးသတငှးတှလညှေးကှားထားပါတယှ ကနှောတှို့Fanတှကေိုယတှိုငလှညှးဇာတလှမှးအဆုံးကို သိခငှပှမယှေ့ one piece ဇာတလှမှးဆုံးသှားမှာကိုလညှးစိုးရိမမှိတာအမှနပှဲဒါပမယှေ့ Eiichiro Odaရဲ့ ကနှှးမာရေးဟာတဖှညှးဖှညှးခှှတယှှငှးလာတာကှောငှ့ one pieceဇာတလှမှးလညှး မကှာခငပှှီးဆုံးတော့မယလှို့ကောလဟာလတှထှကနှပေေါတယှ..။ ဇာတလှမှးပှီးဆုံးသှားရငတှောငှ One Piece Anime လေးကိုကနှောတှို့တှအမှတရှေပှီး ကနှနှခေဲ့မယဆှိုတာအသအခှောပါပဲ ..။ ROMANCE DAWN ARC ONE PIECE EPISODE 1 ( E ...
Wotakoi: Love is Hard for Otaku Fujoushiတ‌ေယာက်ဖြစ်တဲ့Momose Narumi ဟာသူဟာ Fujoushiတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူ့ရည်းစားကိုသိသွားတော့ သူမကို ဖြတ်လိုက်ပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ သူမလည်း ထို ကုမ္ပဏီကနေ ထွက်ပြီး တခြား ကုမ္ပဏီကို ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ် ထိုကုမ္ပဏီတွင် သူမ၏ Otakuငယ်သူငယ်ချင်း Hirotaka Nifuji နဲ့တွေ့သွားပါတယ် သူမရဲ့ otaku အကြောင်းအရာတွေကို ထိုကုမ္ပဏီကလူ‌ေတွသိသွားမလား ‌စောင်ကိုက်ပြီးကြည့်ရလောက်အောင် Ro ကြမယ့် ကားဖြစ်ပါတယ် Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode 6
Great Pretender 2020 Jun2မှာစတင်ထွက်ရှိထားတဲ့ Netflix ရဲ့ ONA အမျိုးအစား anime series တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ anime ကို တာဝန်ယူ animate ထားတာကတော့ Attack on Titan, Vinland Saga တို့လို anime တွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် WIT studio ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ WIT studio ရဲ့ original anime ဖြစ်ပြီး Episode 23 ခုထိ ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ကတော့... Adamura Makoto ဆိုတဲ့ ငတိဟာ သူကိုယ်သူ ဂျပန့်ထိပ်သီး လူလိမ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဘယ်သူကိုမဆိုလှည့်စားနိုင်တယ်လို့ စိတ်ကြီးဝင်နေသူပါ။ ဒါမဲ့ တနေ့မှာတော့ Laurent ဆိုတဲ့ပြင်သစ်လူ Tourist တယောက်ကို လှည့်စားမိရာကနေ ငါးဂျင်းဆီနဲ့ ငါဂျင်းအကြော်ခံရပြီး သူပဲ ပြန်အလိမ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အမှန်တော့ Laurent ဟာ 'Confidence man' ...
Sweet Blue Flowers Aoi hana series ကတခြား အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့မတူပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ့် Anime seriesတစ်ခုပါ။Aoi hana က Yuri series ဖြစ်ပေမည့်လဲ Slice of life,comedy ရယ်၊heterosexual romance (လိင်ကွဲချစ်ခြင်း) စတဲ့အမျိုးအစားစုံလင်စွာပါဝင်တယ့် series ကားကောင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီကားရဲ့မတူထူးခြားတယ့်အချက်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာပေးမှုတွေလည်းပါဝင်တာပါပဲ။တစ်နည်းအားဖြင့် တော့18+ပေါ့(ထင်ရတာပဲ)။ပထမပိုင်းက Fumiဆိုတယ့်ကောင်မလေးက ငိုနေရာကနေစတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတာတော့ဖီးလ်အောက်မှာစိုးလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြည့်။သူ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့။Akira တဲ့။သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ကအရမ်းချစ်။ဒါမယ့်တစ်နေ့မိဘတွေအိမ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်ကွဲကွဲပါတော့တယ်။အဲ့ဒဏ်ရာကိုကုသပေးတဲ့သူ့ဝမ်းကွဲအမ Chizuကိုသူချစ်မိသွားသော်လည်းကံကြမ္မာလှည့်စားမှုကြောင့်ချစ်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါမယ့်သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့မူလတန်းကတည်းကခွဲခွာခိုင်းခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့.... Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11
The Millionaire Detective — Balance: UNLIMITED Translated & Encoded by Chiaki Review ဒီ Anime လေး မှာ တော့ ... အ ရာ ရာ ကို ငွေ နဲ့ ဖြေ ရှင်း တတ် တဲ့ စုံ ထောက် သူ ဌေး လေး Kambe Daisuke နဲ့ တ ရား မျှ တ မှု ကို မြတ် နိုး တဲ့ Kato Haru ဆို တဲ့ စုံ ထောက် လေး, မ တည့် အ တူ နေ ပြီး လျှို့ ဝှက် နက် နဲ လှ တဲ့ မှု ခင်း တွေ ကို ဘယ် လို ...
Dragon Ball Z Kai Db kai review Db kai review စၾကာဝဠာနံပါတ္၁စစ္သည္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္တဲ့ saiya မ်ိဳးႏြယ္ဟာေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာရန္သူရဲ့အေၾကာက္တရားေၾကာင့္မ်ိဳးသုန္းကာနီးျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္ ရွင္သန္ခဲ့တဲ့သူေတြကေတာ့၄ေယာက္ပဲက်န္ပါတယ္ mc ျဖစ္တဲ့ goku ကလဲအဲ့ saiya မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ပါပဲ သူကမၻာထဲေရာက္လာၿပီးေနာက္ ဘူ႐ူမာနဲ႔ေတြ႕ဆုံၿပီးနဂါးဓာတ္လုံးေတြလိုက္ရွာတဲ့ဇာတ္လမ္းကေန ဆရာႀကီးရိုရွီနဲ႔အတူေလ့က်င့္ၾကရာကေန fighter စစ္စစ္ျဖစ္သြားၿပီး အိမ္ေထာင္ပါက်ၿပီးကေလးပါရသြားပါတယ္(faေတြၾကည့္လို့ရပါတယ္ ဒီထဲမွာ fighting အခန္းေတြက ro တဲ့အခန္းထက္ပိုမ်ားပါတယ္) သူတို့ရဲ့ကေလးအသက္၄ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ goku ရဲ့အကိုေရာက္လာၿပီးျပႆနာလာရွာပါေတာ့တယ္ goku တို့ဘယ္လိုေျဖရွင္းၾကမလဲ ၾကည့္ရေအာင္ Db kai Ep 1 Db kai Ep2Db kai Ep3Db kai Ep4Db kai Ep5Db kai Ep 6
Beastars [unicode] လီဂိုရှိဟာချယ်ရီတွန်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ယူနေတဲ့တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့မြေခွေးကြီးတစ်ကောင်ပါ။သူဟာသူ့သူငယ်ချင်း ဂျက်နဲ့အတူ သားစားတန်းလျားမှာဘဲနေပါတယ်။​ကျောင်းပြဇာတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျောင်းရဲ့ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ဒရယ်ကြီးလူးဝစ်(စ်)ဦးဆောင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကိုအထောက်အပံ့ပေးရတဲ့stagehandတစ်ကောင်ပါ တစ်နေ့မှာတော့အတူတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းတမ်ဟာတစ်ညမှာ သတ်စားခံခဲ့ရတယ်။အဲ့ပြစ်မှုကြောင်အပင်စားသတ္တဝါနဲ့အသားစားသတ္တဝါတွေကြားမှာသံသယတွေနဲ့မပြေလည်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့အချိန်မှာဘဲ စော်ကြည်ဘဲလူဝစ်(စ်)နဲ့ချစ်နေတဲ့ယူန်မလေး ဟာရုကိုချစ်မိသွားတဲ့အခါမှာတော့... အပင်စားသတ္တဝါနဲ့အသားစားသတ္တဝါတို့အကြားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ၊အချစ်တွေ၊စိုးရိမ်မှုတွေကစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမယ်animeကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ [zawgyi] လီဂိုရွိဟာခ်ယ္ရီတြန္တကၠသိုလ္မွာပညာသင္ယူေနတဲ့တည္ၿငိမ္ေအးေဆးတဲ့ေျမေခြးႀကီးတစ္ေကာင္ပါ။သူဟာသူ႔သူငယ္ခ်င္း ဂ်က္နဲ႔အတူ သားစားတန္းလ်ားမွာဘဲေနပါတယ္။​ေက်ာင္းျပဇာတ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးေက်ာင္းရဲ့ပ်ိဳတိုင္းႀကိဳက္တဲ့ႏွင္းဆီခိုင္ဒရယ္ႀကီးလူးဝစ္(စ္)ဦးေဆာင္တဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြကိုအေထာက္အပံ့ေပးရတဲ့stagehandတစ္ေကာင္ပါ တစ္ေန႔မွာေတာ့အတူတူအလုပ္လုပ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းတမ္ဟာတစ္ညမွာ သတ္စားခံခဲ့ရတယ္။အဲ့ျပစ္မႈေၾကာင္အပင္စားသတၱဝါနဲ႔အသားစားသတၱဝါေတြၾကားမွာသံသယေတြနဲ႔မေျပလည္မႈေတြျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။အဲ့အခ်ိန္မွာဘဲ ေစာ္ၾကည္ဘဲလူဝစ္(စ္)နဲ႔ခ်စ္ေနတဲ့ယူန္မေလး ဟာ႐ုကိုခ်စ္မိသြားတဲ့အခါမွာေတာ့... အပင္စားသတၱဝါနဲ႔အသားစားသတၱဝါတို႔အၾကားျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊အခ်စ္ေတြ၊စိုးရိမ္မႈေတြကစိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ရမယ္animeေကာင္းေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ Translated by Khin Kalayar Ni Soe Encoded by Shine Bo Bo Latt ****************************************** ‏Episode 1 [157MB - 1080p] Mediafire Episode2[154MB - 1080p] Mega.nz / Racaty / MMDrive / Usersdrive / Myandrive Episode3[139MB - 1080p] Mega.nz / Yandex / Myandrive / Racaty / Usersdrive / MMdrive Episode4[159MB - 1080p] Mega.nz / Myandrive / Yandex / ...
TMDb: 8.7/10 254 votes
After the Rain မိုးရွာပြီးတဲ့နောက်မှာ အချစ်ဟာအရောက်လာတယ်။ သူက ကျွန်မထက်အသက်ကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့အရာရာကို ငြီးငွေ့နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လေ အသက်၄၅နှစ်အရွယ်ဟာ ဘာအိပ်မက်မှမရှိတော့တဲ့လူတစ်ယောက်တဲ့ ကျွန်မတော့သူ့ကိုချစ်တယ်။ အမြဲပဲတွေ့ချင်နေမိတယ်။သူတစ်ခါ ကျွန်မ ထီးမပါလာတော့ သူ ကျွန်မဆီ ထီးကလေးနဲ့အရောက်လာတယ်။ကျွန်မသိချင်တာက ကျွန်မထီးမပါလာတဲ့အခါတိုင်းသူရောက်လာနိုင်မလားဆိုတာပဲ ။ ဒါဆို ကျွန်မထီးယူလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ Review crd World of Anime Myanmar All anime episodes (780MB)
Anime Name – Samurai Champloo (2004) Genre - Action & Adventure,Animation,Comedy,Drama Total - 26 episodes Review - Fuu Kasumi ဟာ ငယ်ရွယ်ပြီးနမော်နမဲ့သိပ်နိုင်တဲ့ စာပွဲထိုးမလေးပါ။ တစ်နေ့မှာတော့သူမ ဟာ ဧည့်သည်တစ်ယောက်အပေါ် ကော်ဖီတွေဖိတ်ကျသွားပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းတစ်စုက သူမကိုသောက်ပြဿနာရှာတဲ့အခါမှာတော့ ဆာမူရိုင်းနှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Mugenနဲ့ Jin ကလာကယ်သွားကြပါတယ် နောက်တော့ Mugen ဟာ Jin ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ စိန်ခေါ်ပါတယ် နှစ်ကောင်သားတိုက်ရင်းခိုက်ရင်းကနေ Shibui Tomonoshina ခမျာ ကြားထဲ ဂန့်သွားရှာပါတယ် အဲ့ဒီပြစ်မှုအတွက် နှကောင်သားသေဒဏ်ပေးခံလိုက်ရပါတယ် ဒါပေမဲ့လဲ Fuu ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူတို့လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ကြတယ် အပြန်အလှန်အနေနဲ့ Fuu ဟာ နေကြာနံ့ရှိတဲ့ဆာမူရိုင်းကိုရှာဖို့ သူမနဲ့အတူခရီးထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ကဲ... အဲ့တော့ .. Fuu ဟာ သူမရှာနေတဲ့သူကိုတွေ့မှာလား? လမ်းမှာရော ဘာတွေဖြစ်ကြမှာလဲ? တလဲလဲနဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်ရင်း သူတို့သုံးကောင် ကိုက်ကြပုံတွေ အလွဲတွေကို ခုပဲကြည့်ပြီးဟားကြပါစို့ . . . Translated by Mahaww,Yu Ta & Robin Encoded by Haruko,Thu Thu Lwin,Vax,Yamada ...
Anime Name – Samurai Champloo (2004)
Your Lie in April Review - #crd Kousei Arima ဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အလွန်ထူးချွန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Pianist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။Saki piano ပြိုင်ပွဲမှာလည်း အသက်အငယ်ဆုံးအနေနဲ့ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟယ သူ့ရဲ့ဆရာနည်းပြလို့လည်းပြောလို့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ အမေကြောင့်လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Kousei ဟာ အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်မှာ သူ့အမေဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး Kousei ဟာ စိတ်ကျရောဂါတစ်မျိုးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ သူ့ဟာ သူ့ရဲ့ Piano တီးသံကိုတောင် မကြားနိုင်တော့တယ့် အခြေအနေအထိ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူဟာ သူ့ရဲ့ Piano ကစားခြင်းကို ၂နှစ်ကျော်ကြာအောင် စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝကိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Tsubaki,Watari တို့နဲ့အတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ Tsubaki ဟာဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးဆိုပေမယ့် Kousei ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ်။သူဟာ Kousei စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းပါ။ပြီးတော့ Kousei ကို ...
TMDb: 8.7/10 146 votes
Eden of the East 2010 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 22 ရက်နေ့မှာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ လက်နှက်ကြီး ဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ် ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဘဲအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လက်ချက်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်မှုမရှိစေခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီ့နေ့ကိုတော့ သတိမမူတဲ့ တနင်္လာနေ့လို့ နာမည်ကြီးလာခဲ့ပြီး များမကြာမှီမှာဘဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာခဲ့ကာ အဲ့ဒီ့နေ့ကိုမေ့ပျောက်သွားခဲ့ကြပါတယ် Saki Morimi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝဟာလည်း အမေရီကန်ကိုလာလည်တဲ့ဘွဲ့ရခရီးစဉ်အတွင်း Akira Takizawa ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ရုတ်တရတ်ကယ်တင်မှုကြောင့် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် Akira Takizawa ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလည်းထူးစမ်းဖို့ကောင်းသလိုမျိုး သူ့ကိုယ်သူဘယ်သူမှန်းလည်းမမှတ်မိပါဘူး သူသတိရတာကတော့ Saki Morimi ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာကနေစတာပါ Akira Takizawa ကသတိရလာလာချင်းသူကိုယ်တိုင်အဝတ်ဗလာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အပြင် သူ့ကိုယ်သူအကြမ်းဖက်သမားလို့လဲထင်နေခဲ့ပါတယ် နောက်တော့ သူကယ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေး Saki Morimi နဲ့အတူဂျပန်ကိုပြန်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာခဲ့တယ် ဂျပန်ပြန်ဖို့လေဆိပ်မှာစောင့်နေကြတုန်း ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ဟာ လက်နှက်ကြီးဒုံးကျည်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတွေ့လိုက်ကြတယ် ဒါဆို Akira Takizawa ဟာဒီအမှုနဲ့ပက်သက်နေမလား သူ့ကိုယ်သူဘယ်လိုပြန်ရှာဖွေမလဲဆိုတာကတော့ [Mediafire Links] Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Epiosde 10 Epiosde 11 Translated by Shouke Encoded by Kichiro The End
Given Episodes: 11 Rating: 5.15 * Based onaBL music manga series by [Kizu Natsuki]. Translated by K33 Encoded by Aoi Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 (End)
Saekano: How to RaiseaBoring Girlfriend S2 Name - Saenai Heroine no Sosatekata Flat (season2) Episodes - 11 episodes Source - Light novel Generes - Harem,Comedy,Romance,Ecchi,School review Tomoya Akiဟာ အထက်တန်းကျောင်းသား Otakuတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။ သူဟာ အမှတ်မထင်ဘဲ အရမ်းကို လှပတဲ့ Megumi Kato ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တွေ့ဆုံမှုနောက်ပိုင်းမှာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ Eriri Spencer Sawamuraဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာ လူမျိုးခြား(တစ်ဝက်)ဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Tomoya Akiနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။ Kasumigaoka Utaha လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်မလေးဟာ စာပေအရေးအသားမှာ အရမ်းတော်လွန်းတဲ့သူဖြစ်သလို Tomoya Akiနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပြန်ပါတယ်။နောက်ပိုင်း သူတို့တစ်တွေ ကျောင်းတက်နေရင်း ဘယ်လို အခက်အခဲနဲ့ကြုံရမလဲ သူတို့အတူတူဖန်တီးချင်ကြတဲ့ date gameကို ...
The Promised Neverland The promised neverland (Complete) Anime title - The promised neverland Genre - Horror, Mystery,Sci-fi,Shounen Episodes - 12 Rating - 8.8 🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃 ကဲ 2019ရဲ့ Ongoing အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The promised neverland ဟာဆိုရင်မနေ့ကအပိုင်း ၁ ထွက်ရှိလာပါပြီ။ဇာတ်လမ်းကတော့ ep 1 ထဲနဲ့တင်တော်တော်လေး Hype ဖို့ကောင်းပါတယ်။ Horror လောက်တော့လည်းကြောက်ဖို့မကောင်းသလို Dark fantasy အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်တာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါရစေ။ Review Ray၊Emma နဲ့Norman ဆိုတဲ့ ကလေးသုံးယောက်ဟာမိဘဂေဟာမှာ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ကလေးသုံးယောက်ဖြစ်ပြီး "မေမေ" လို့သူတို့တွေခေါ်ကြတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ရဲ့စောင့်ရှောက်မှု့နဲ့အတူကြီးပြင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။တခြား ဂေဟာများနဲ့မတူ သူတို့ဂေဟာလေးဟာ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းလှသလို ဂေဟာတွင်းတားမြစ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ အဲ့တာကတော့တောစပ်နားက ဂိတ်တံခါးကနေအပြင်ကိုထွက်သွားခွင့်မပြုတာပါဘဲ။ ကလေးအရွယ်များဖြစ်တာကြောင့် အန္တာရယ်ရှိတဲ့အရာများကနေကာကွယ်ဖို့လို့ပြောပေမယ့် ဒီ့ထက်နက်ရှိုင်းတဲ့ ...
TMDb: 9.1/10 109 votes
Carole & Tuesday Carole and Tuesday Name --- Carole and Tuesday Episodes --- 24 Aired --- April 11,2019 to ? Generes --- Sci-Fi, Music, Drama, Romance ဒီတစ္ခါေတာ့ drama ႀကိဳက္တတ္တဲ့သူေတြအတြက္ ongoing ေကာင္းေလးကိုမိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Reviewed By Deku Alba ၿမိဳ႕ရဲ႕ နယ္စပ္မွာ႐ွိတဲ့ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္။ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္က ဂီတပညာ႐ွင္ျဖစ္လာဖို႔။ အခ်ိနိပိုင္းအလုပ္လုပ္ရင္းနဲ႔ သူ႔ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားေနတဲ့သူ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔စိတ္ထဲမွာ တစ္စံုတစ္ခုကအျမဲတမ္းေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္လို႔ ခံစားေနရတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္။ သူမနာမည္ကေတာ့ Carole. Herschel ၿမိဳ႕ရဲ႕လက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့မိသားစုကေန ေမြးဖြားလာတဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္။ သူမရဲ့ရည္မွန္းခ်က္လည္းပဲ ဂီတပညာ႐ွင္ျဖစ္လာဖို႔။ ဒါေပမယ့္သူမကိုဘယ္သူကမွနားမလည္ေပးႏိုင္ၾကဘူး။ ၿပီးေတာ့လည္း အျမဲတမ္းတစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ေနတယ္လို႔ ခံစားေနရတဲ့သူ။ သူမနာမည္ကေတာ့ Tuesday. တစ္ေန႔ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေတြ႔ဆံုဖို႔ အခြင့္အေရးရလာတဲ့အခါ သူတို႔ေတြက သီခ်င္းေတြဆိုခ်င္ၾကတယ္။ သီခ်င္းေတြလုပ္ခ်င္ၾကတယ္။ သူတို႔စီမွာအခြင့္အေရး႐ွိတယ္လို႔လည္း ယံုၾကည္ၾကတယ္။ အစကေတာ့သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းၿပီးမွ လိႈင္းေသးေသးေလးပဲဖန္တီးလိုက္ၾကတာပါပဲ။ ...
Punch Line Punch Line [အတြင္းခံသူရဲေကာင္းေလး] ============================= English Name - Punch Line Japanese - パンチライン Myanmar Name - အတြင္းခံသူရဲေကာင္းေလး Type - TV Episodes - 12 Status - ျပသျခင္းျပီးဆံုး ျပသခဲ့သည့္ရက္ဆြဲ - ဧပရယ္လ ၁၀ရက္, ၂၀၁၅ ခုနစ္ မွ ဂ်န္နဝါရီလ ၂၆ရက္, ၂၀၁၅ထိ Premiered - Spring 2015 Producers - Aniplex, Dentsu, Fuji TV, MAGES., Kyoraku Industrial Holdings, Kansai Telecasting Licensors - Sentai Filmworks Studios - MAPPA Source - Original Genres - Comedy, Ecchi, Sci-Fi, Super Power, Supernatural ႀကာျမင့္ခ်ိန္ - 23 min. Per Episode Rating ...
Kabaneri of the Iron Fortress Genre - Action, Drama, Fantasy, Horror ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်....အဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကို တော်ရုံနဲ့ သတ်လို့မရပဲ သူ့နှလုံးသားကို ထိုးနိုင်မှသာ သတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်....အဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ နှလုံးကိုလည်း သံနဲ့ ကာထားတယ်ဆိုသတဲ့။ အဲ့မကောင်းဆိုးဝါးက လူတွေကိုကိုက်လိုက်ရင် လူတွေမှာ ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သွားပြီး Kabane လို့ ခေါ်တဲ့အကောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ အဲ့ kabane တွေနဲ့ ဝေးကွာတဲ့ နေရာ အေ့ရှဘက်မှာရှိတဲ့ Hinomoto ဆိုတဲ့ ကျွန်းမှာ လူသားတွေ နေကြပါတယ်။ နောက်ပြီး လူတွေဟာ ဘူတာတွေကနေတစ်ဆင့် တစ်နေရာကတစ်နေရာ ပစ္စည်းတွေ သယ်ယူပို့ဆောင်ကြပါတယ်။ Hayajiro ဘူတာမှာနေတဲ့ Ikoma ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ အဲ့သတ္တဝါတွေကို နှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ လက်နက်ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ အဲ့ဘူတာမှာရှိတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ kabane အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး Ikoma ဟာ သူ့လက်နက်ကို အမှန်တကယ်စမ်းသပ်နိုင်မယ့်အချိန် ရောက်လာပါတယ်။ Ep1 (150 MB) Ep2 (167 MB) Ep3 ...
ERASED Satoru Fujinuma ဟာ အသက္ ၂၉ႏွစ္အရြယ္၊ Magaka လုပ္ဖို႕ ၾကိဳးစားေနခဲ့ေပမယ့္လည္း အဆင္မေျပေသးတဲ့အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ့ သူဟာ ပီဇာဆိုင္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနရသူပါ။ ေနာက္ျပီး သူ႕မွာ ထူးဆန္းတဲ့အစြမ္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဟာက မေကာင္းတာတစ္ခုခု ျဖစ္ခါနီးဆိုရင္ အဲ့အျဖစ္အပ်က္မျဖစ္ခင္ မိနစ္ပိုင္းအလိုေလာက္ အတိတ္ကို ျပန္ျပန္ေရာက္သြားေလ့ရွိပါတယ္။ Fujinuma ဟာ အဲ့အစြမ္းကို အသုံးခ်ျပီး လူေတြအမ်ားၾကီးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ရက္မွာေတာ့ သူ႕အေမဟာ လူသတ္သမားတစ္ဦး သတ္တာကို ခံလိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီး သူ႕ကိုသတ္တဲ့သူဟာ သားျဖစ္သူ Fujinuma ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႕ ရဲေတြက ယူဆတဲ့အတြက္ သူဟာ ဝရမ္းေျပးျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုးထဲက အေကာင္းလို႕ေျပာရမလားမသိ၊ သူ ရဲေတြလက္က ေျပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ရုတ္တရတ္ သူဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၈ႏွစ္အၾကာကာလ၊ ၁၉၈၈ ကို ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ပါသတဲ့။ အဲ့မွာ သူသိလိုက္ရတာကေတာ့ ဟိုးအရင္ သူ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘဝက သူ႕အတန္းေဖာ္ေတြကို ...
TMDb: 8.1/10 149 votes
The Millionaire Detective — Balance: UNLIMITED ဒီanimeရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစပြီး အခြေပြုထားတာက ရဲမှုခင်းတွေကနေပေါ့။ ဒီထဲမှာတချို့ရဲတွေဟာ တရားမျှတမှုအတွက်ဆိုရင် ငွေမရရုံကလို့ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ အသက်ကိုစွန့်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ပေးမယ့်သူတွေပါ။ တချို့သောရဲတွေကတော့ တရားမျှတမှုဆိုတာ ပါးစပ်ကနေထွက်ပြီး လေထဲမှာပျောက်သွားတဲ့အချိန် လောက်တောင်ကြာရှည်မခံဘူးတဲ့။ ဘဝမှာ တရားမျှတမှုထက်အရေးကြီးတာက ငွေ ဘက်လိုက်မှု စသဖြင့်ပေါ့။ငွေရရင်ပြီးကော တရားမျှတတ မမျှတတ ဂရုမစိုက်တဲ့ရဲတွေ လို့ဆိုရမှာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာမှအဓိကmain characterတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သာမန်စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဆင့်သာရှိတဲ့ Haru Kato ပါ။ သူ့ရဲ့အဆင့်က သာမန်စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်နေရခြင်းကတော့ သူဟာ တစ်ချိန်ကပထမတန်းစားစုံထောက် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုကြောင့် သူ့ကိုရာထူးကနေလျှော့ချလိုက်တာပါ။ စုံထောက် Haru Kato ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ နေရာတိုင်းမှာတရားမျှတမှုနဲ့စည်းကမ်းဆိုတာရှိရမယ် တရားမျှတမှုမရှိပဲ စည်းကမ်းကိုဖောက်ဖျက်တဲ့သူဟာ ဥပဒေကချမှတ်ထားတဲ့ အပြစ်အလျောက် ပြန်ပေးဆပ်ရပါမယ် ဆိုတဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ပါ။ နောက်ထပ်main characterတစ်ယောက်ကတော့ စုံထောက် Daisuke Kambe ပါ။ သူကတော့ခုနကစုံထောက် Haru Kato နဲ့လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ပြောပေမယ့် တချို့ရဲတွေလိုငွေမက်တဲ့သူမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့မှာရေလိုလေလိုအပေါဆုံးက ငွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အရာရာကိုငွေနဲ့ဖြေရှင်းတယ်။ ငွေရှိရင်အားလုံးပြီးတယ် လို့ခံယူထားတဲ့တစ်ယောက်။မှုခင်းတစ်ခုကိုသူလိုက်ပြီဆိုရင် ပြည်သူ အရပ်သား ရဲ စုံထောက် ဘယ်သူ့ကိုမှ သူထည့်မတွက်ပါဘူး။သူရဲ့အရေးကြီးတဲ့အဓိကဦးတည်ချက် ဖြစ်တဲ့ မှုခင်းထဲကရာဇဝတ်ကောင်ကိုပဲအသေအကြေ လိုက်ပါတယ်။ဖြစ်လာသမျှအကျိုးဆက်နဲ့နစ်နာကြေးအားလုံး ကိုငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့စုံထောက်တစ်ယောက်ပါ။ ဒီမှာဇာတ်လမ်းကစပါပြီ။ တရားမျှတမှုကိုမြတ်နိုးတယ်။ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးလို့ခံယူထားတဲ့ စုံထောက် Haru Kato ဟာ အရာရာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်နဲ့ ဘယ်ကိစ္စမဆို ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဖြေရှင်းနေတဲ့ စုံထောက်Daisuke Kambeကိုဘယ်လိုမှကြည့်လို့မရပါဘူး။ ဖြစ်ချင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ရာထူးတစ်ခုထဲမှာနှစ်ယောက်အတူတူတွဲလုပ်ရမှာပါ။ အရာရာမှာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အမှုတွဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းကတစ်နေရာရာမှာဆုံမှတ်ရှိနိုင်ပါ့မလား... Translated by Kan San Encoded by Shine Bo Bo Latt Season  Episode 1 [1080p] Yandex / Gdrive / Racaty / ...
Fate Universe 2